Kedu ihe ibuli ibu na-eme n’ahụ gị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-ebuli wieghts - olee otu anyị si edozi
Kedu ihe ibuli ibu na-eme n’ahụ gị?
Ibu ibuabụghị naanị ịba ụba na iwuli ahụ ike, ndị ọkachamara na-ekwu. Uru ya gụnyere ịkwalite ọnọdụ dị mma, ụra ka mma, inweta njupụta ọkpụkpụ, mmeziibu ibuọnwụ, na-eme ka metabolism dị elu, na-agbada mbufụt ma na-egbochi ọrịa na-adịghị ala ala, n'etiti ndepụta asa akwa.June 10. 2017 Nọvemba
Mkpụrụ ahụ, anyị nwere ihe karịrị narị isii. Ha mejuputara n’etiti 1/3 na 1/2 nke ibu ahu anyi ya na ihe jikotara anyi ha jikoo anyi, jide anyi ma nyere anyi aka imeghari. Buildingzụ akwara bụ ihe omume ntụrụndụ gị, mọzụlụ chọrọ nlebara anya gị oge niile, n'ihi na otu ị si emeso ha kwa ụbọchị ga-ekpebi ma ha ga-akpọnwụ ma ọ bụ na-eto.
Ka anyị kwuo na ị kwụ n’ihu ọnụ ụzọ dị njikere imeghe ya. Brainbụrụ gị na akwara gị ga-enyere gị aka imezu ebumnuche a. Nke mbụ, ụbụrụ gị na-eziga ihe mgbaàmà na akwara moto na ogwe aka gị.
Mgbe ha natara ozi a, ha na-agba ọkụ, na-eme ka uru ahụ kpụkọta ma zuru ike nke na-adọta ọkpụkpụ dị na ogwe aka gị ma mepụta mmegharị ahụ achọrọ. Ihe ịma aka ka ukwuu, ihe mgbaàmà ụbụrụ gị na-abawanye, na akụkụ ndị ọzọ ọ na-achịkọta iji nyere gị aka mezue ọrụ gị, mana gịnị ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ahụ bụ nke ígwè siri ike, nke oge akwara ogwe aka gị agaghịzi enwe ike ịmepụta esemokwu nke onwe ha imeghe ya, nke mere na ụbụrụ gị na-agwa gị okwu. Put na-etinye ụkwụ gị elu, mee ka afọ gị, ma gbanwee azụ gị iji mepụta ike zuru ezu iji dọka ya.
Usoro ụjọ gị dị na-enwe ihe onwunwe ị nwere, akwara ndị ọzọ na-eme iji gboo mkpa gị, akwara gị na-enweta ụdị mgbanwe cellular dị iche. Ọ bụrụ na itinye ha n'okpuru nrụgide, ha ga-ata ahụhụ microscopic, nke bụ ihe dị mma na ọnọdụ a. Na nzaghachi, mkpụrụ ndụ ndị merụrụ ahụ na-ewepụta ụmụ irighiri ihe ọkụkụ a na-akpọ cytokines, nke na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ mezie mmerụ ahụ.
Nke a bụ mgbe anwansi ime ahụ ike na-eme. Nke ka njọ na mmebi ahụ anụ ahụ, otu ahụ ka arụ gị ga-edozi onwe ya. Ihe mebiri na mmezi ihe na-emecha na-eme ka akwara buru ibu ma sie ike ka ha na-emegharị ka ọchịchọ dị elu dị elu.
Ebe ọ bụ na ahụ anyị anabatala ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị, ha anaghị arụ ọrụ zuru oke iji kpalite uto nke akwara ọhụrụ. Yabụ iji wulite mọzụlụ ọhụrụ, usoro bụ c. Tinyere hypertrophy, mkpụrụ ndụ anyị ga-ekpughere na ọrụ dị elu karịa ka ha na-adịbu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ịnọgide na-etinye nguzogide ụfọdụ na akwara gị, ha ga-ada mbà, usoro a maara dị ka atrophy akwara, akwara ruo nnukwu esemokwu, ọkachasị mgbe a na-agbatị akwara ahụ, nke a makwaara dị ka mgbatị eccentric, na -emepụta ọnọdụ dị mma maka ọhụụ uto. Otú ọ dị, uru ahụ na-adabere karịa ihe omume iji too. Enweghị ezigbo ihe oriri, homonụ, na izu ike, ahụ gị agaghị enwe ike ịrụzi eriri akwara mebiri emebi.
Protein na nri anyị na - ejigide oke akwara site n’inye ihe eji arụ ụlọ maka anụ ahụ ọhụrụ n’ụdị amino acid. Inye nri protein zuru oke, yana homonụ na-apụtakarị dị ka ihe na-akpata insulin na testosterone, na-enyere aka tinye ahụ na steeti ebe anụ ahụ na-edozi ma na-eto. Usoro mmezi a dị oke mkpa na-ewere ọnọdụ mgbe anyị na-ezu ike, ọkachasị n'abalị mgbe anyị na-ehi ụra.
Okike na afọ na-emetụta usoro mmezi a, ọ bụ ya mere ụmụ okorobịa nwere testosterone nwere isi na-amalite ịmalite akwara. Mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ekerekwa òkè n’ịzụ akwara. Fọdụ ndị mmadụ nwere mmeghachi omume nke siri ike karị na mmebi ahụ ike ma nwee ike idozi onwe ha ma dochie eriri akwara mebiri emebi, na-eme ka ikike ha nwere ike ịmalite.
Ahụ na-emeghachi omume na ihe ị chọrọ na ya. Site na ịdọpụ akwara gị, iri nri, izu ike, na ikwugharị ị na-emepụta ọnọdụ iji mee ka akwara gị buru ibu ma sie ike dị ka o kwere mee. Mkpụrụ ahụ dị ka ndụ: uto bara uru chọrọ ịma aka na nrụgide.
Kedu ihe na-eme n’ahụ gị mgbe ịmalitere ibuli ibu?
GịAga m atụfuibu ibuma gbaakwuo calorie
Ọ bụ ezie na cardio nwere ike inyere akagịtufuo abụba afọ,eweli arọna-enyere akagịnwekwuo ahụ ike, nke nwekwara ike inye akagịgbaa calorie karia. Nke ahụ bụ n'ihi na mọzụlụ na-arụ ọrụ nke ọma, nke pụtarahagbaa calories ọbụna mgbeị na-adịghị emega ahụ.Mar 15 2019
Ọ dị mma ibulite ibu kwa ụbọchị?
''Na-eweli ibu kwa ụbọchịbunchebeọ bụrụhaala na ị na-ezu ike dị iche iche akwara, 'Brathwaite na-ekwu. 'Ọ bụrụ na ị toro ogo ma na-azụ mmadụ anọ na isiiụbọchịotu izu, m ga-akwado ịkụ akwara dị iche iche na azụ gị azụụbọchị, ka na-ekwe ka otu onye abụọụbọchịn'etiti oge na-arụ ọrụ otu ahụ ike.Sep 8 2020
Ekwetara m na m hiere ụzọ. M n'ezie na akwado nke overtraining. Aga m agwa gị ihe niile gbasara m taa.
Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa, Jeff Cavaliere, ATHLEANX.COM verttụgharị anya, otu n'ime nsogbu m kwuru banyere ya bụ ihe kachasị mkpa maka ịkpụzi uru nke ọgwụ anyị sitere na ndị egwuregwu gị. Ọ dị mma, n'ihi na ọ bụrụ na ị naghị enye ahụ gị oge zuru ike iji zuru ike wee gbakee, ọ nwere ike imebi ahụ ike gị ịmebe ahụ ike ka ị mepee ihe ndị ọzọ maka ịdị ndụ sitere n'okike karịa ịchọ mma ma ọ bụ inweta.
N'ikwu ya, aghaghị m ịgbanwe obi m. N'ezie, enwere m ezighi ezi n'oge niile. A bu m onye na-akwado ihe a na-ekwu banyere nsogbu m nwetara na otu n'ime isiokwu ndị ọzọ anyị gbasara isiokwu m mere na mbụ.
N’isiokwu a, ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, aga m ejikọ ya ebe a. M ga-egosi gị ụfọdụ ezigbo mmekọrịta ụwa dị n'etiti ịgafe ahịrị ọma a, aka nri. Ebe mkpali nye ihe n’adighi nma n’otu ebe.
Isi ihe atụ niile a sitere na Jung bụ iji gosi gị na akara a dị mma. N'ụzọ doro anya, mgbe inwere tan ma ọ bụ ntachu, enwere akara a nke ị ga-esote nke na-esote. Otú ahụ ka ọ dịkwa n’ihe banyere ị .ụ ọgwụ.
Mgbe ị na-enye onwe gị, enwere oge nke usoro ọgwụgwọ a kwesịrị ekwesị maka ịgwọ ọnọdụ gị ruo mgbe ị ruru n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ n'ime ala. Ọfọn, nke ahụ bụ okwu m nwetara na isiokwu ahụ, ọ na-ekwu na m ga-agụ ya ebe a. 'Ndị mmadụ taa na-echekarị banyere ịmachi ihe na-adịghị mma.
Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe ma ọlị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwulite akwara na ngwa ọgụ ndị a, ị ga-emerịrị ihe niile. Ọ bụrụ na ị na-azụ ọzụzụ ahụ siri ike ma ọ bụ ọtụtụ awa ahụ, naanị debe ihe ị nwere.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghafee mọzụlụ gị, ha na-arụ ọrụ karịa ka a na-emebu ma a manye ha ka ha tolite na ATHLEANX maara ma ọ bụ site na ndụmọdụ ọzụzụ m, ọ bụrụ na nke ahụ bụ nkọwa m bụzi onye na-akwado igba egbe. Vertgbapu aka pụtara ịgbalịsi ike karịa ka ị na-emebu ma ọ bụ nwee mmega ahụ gara aga, bụ ihe achọrọ maka mgbanwe. Cheta na ahụ anyị na-eguzogide mgbanwe.
Backlaghachikwuru ndị nna nna anyị, echiche nke ịtinye akwara, ahụ ike na-eri ume, na anụ ahụ dị nro na ebe ị na-amaghị ebe nri gị ọzọ na-abịa ma ị gbalịsiri ike ịlanarị ụbọchị ọ bụla bụ ihe na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla jiri akuku aru gi. Enweghị ihe gbanwere na mkpụrụ ndụ ihe nketa, ụmụ okorobịa. Iwuli akwara ka bụ ihe ịma aka.
Ọtụtụ mmadụ na-elele edemede a ma ọ bụ na-achọ ụdị edemede a na YouTube nwere ike ikwenye nke a. Ma mgbe ị mere, ị ga-enye ahụ gị, nkwụsi ike gị, ahụ gị ihe mere ị ga-eji too, ihe mere ị ga-eji gbanwee, nke ahụ pụtara na ị ga-agbasi mbọ ike na mgbatị a, mgbatị a ị na-eme Na elu gafee iji mee ka ahụ gị amanye ahụ gị ịgbanwe E. ma ọ bụrụ na nke ahụ na-agwụ ike, m bụ onye na-akwado nke ahụ.
Ọ dị mma, a na m ekwu ya n'oge niile, ị nwere ike zụọ ike ma ọ bụ ịnwere ike ịzụ ogologo oge, mana ị gaghị enwe obere nsogbu. Ysmụ okorobịa ndị na-ekwu na ha na-arụ ọrụ awa abụọ na atọ na awa anọ ma ọ dị mkpa. Ma nke ahụ bụ otú ezigbo mmadụ si azụ.
M wee sị, ụmụ okorobịa, nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ dịghị mkpa ị kwụ n'ahịrị ma ọ bụ na ị naghị azụ ọzụzụ nke ọma ma ọ bụ were ihe ma ọ bụ merie lọtrị mkpụrụ ndụ. Ihe m na-ekwukarị banyere ụmụ okorobịa ndị meriri lọtrị mkpụrụ ndụ ihe nketa bụ nke a, ọ bụrụ na ị nwetara ya, ị kwesịrị ịma site ugbu a. Ikekwe ị ga-ama mgbe oge ị dị afọ iri na abụọ wee kpụọ ntutu gị na ị meriri lọtrị mkpụrụ ndụ.
Mgbe ị gbara okpukpu abụọ nke ụmụaka ọ bụla nọ na klas gị, ị meriri lọtrị mkpụrụ ndụ. Iri na atọ, ị meriri lọtrị mkpụrụ ndụ. Ziri ezi.
Mana otutu mmadu adighi na udi ahu. Yabụ na enwere ụfọdụ ndị dabara n'ụdị a, dị nnọọ ole na ole. Ma ọ bụrụ n’echiche na ịge ntị na nkọwapụta a nke ịgabiga ọzụzụ ga - enyere gị aka n’ihe kpatara gị, apụrụ m ịgwa gị na ọ bụghị.
Nwere ike ọ bụghị naanị enweghị usoro ịtụda okwu na-ekwu na nke a bụ overtraining n'ihi na ọ dị mwute na ị na-ndị mmadụ kweere na overtraining bụ ihe ọ na-abụghị. Vertbanye na ụmụ okorobịa ebe m si bịa na-abịa n'ụzọ dị nnọọ iche. Ntughari, ebe m si bia, bu ihe omumu banyere aru aru, nke na adighi nma nke otutu puku kwuru puku nyocha.
Ndị na-enyocha kemịkal ọbara, nyochaa homonụ ọbara, nyochaa mgbanwe neuromuscular, enweghị ike, ike ijide, n'ihi na ị nweghịzi ike ịme njikọ njikọ a. Neurotransmitter ike gwụrụ, ndị a bụ ọnọdụ niile metụtara ọnọdụ na-adịghị mma. Kedu nke m na-akwadoghị, ọ bụ ebe ahụ ka m kwenyere na anyị ga-agbanye nke ahụ ga-ejedebe ogologo oge mgbatị ndị a.
Na ndị ụwa m, ọ bụrụ na m banye n'ọfịs njikwa njikwa nke otu ndị otu NFL wee kwuo maa, m nwetara gị afọ a. Nnenne, Coach, enwerem gi, anyi nile ga agabiga overtrain this year. Anyị ga-abụ ndị ukwu.
A ga-achụpụ m na nkeji 5 n’ihi na anyị ma nke ahụ abụghị ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ. Gbanwegharị n'echiche nke okwu a bụ ezigbo nghọta nke okwu ahụ bụ ihe na-adịghị mma. Ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma.
Ọ bụ ọrịa na-adịghị mma na-eche na ọ dịghị adị na akụkọ ifo. Ọ bụ eziokwu. Enwere m ike ịgwa gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-enweghị mmasị na mmega ahụ.
Ọ bụrụ n’inwebeghị ogo dị elu n’afọ gara aga, ị tụkwasịghị ike ọ bụla ikwu, ike agwụla gị n’ihe ọ bụla ị na-eme ruo n’ókè m kwuru, ike gwụrụ, ebe ị na-achọghị nọrọ ebe ahụ. I ghaghi ike gwụrụ gị, mgbe ị gwụchara mgbatị ahụ, ike gwụrụ gị. Anaghị m ekwu maka ike ọgwụgwụ, ana m ekwu maka ịbanye n’ọrụ na enweghị ume. sere ịnyịnya ibu gị ọzọ site na ikwugharị otu.
Mgbe ịchọtara onwe gị na mgbu, nkwonkwo, mgbu na ihe mgbu na enweghị ihe kpatara ya. Ọ dịghị ahụ mgbu, mgbu ahụ mgbu bụ ezigbo ụmụ okorobịa, ọ pụtara na ị gosipụtara ma mebie mmebi dị mkpa iji mee ka uto a. Ana m ekwu na mgbu anụ ahụ n'ozuzu, mgbu ahụ ike, ihe ndị a na-enweghị ike ịkọwa, ihe ndị na-enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara na ị nwere ike ikwubiga okwu ókè.
Ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke ahụ, ị ​​na-akụ mgbatị ahụ oge niile ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ awa abụọ, ma ọ bụ awa atọ ma ọ bụ ihe nzuzu ndị ọzọ, awa anọ, ise, isii na-ede ihe ndị a. Not naghị azụ ọzụzụ nke ọma. Na ị na-emega ahụ nke ukwuu, ma ọ bụ na ị meriri lọtrị mkpụrụ ndụ ihe nketa ahụ, ma ọ bụ were ihe, ọ dị mma.
mpịachi electric igwe kwụ otu ebe
Ma nke bụ eziokwu bụ, ị na-emebiga ihe ókè, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe ụmụ okorobịa ị na-akwado ihe ọ bụla iji nwalee ihe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ihe, mee m amara, belata ma hụ ma ọ bụrụkarịrị gị. Adị m njikere ịkụ nzọ na oge 9 n'ime 10 bụ maka gị.
You'll ga-ahụ nzaghachi ka mma maka mgbatị gị site na ibelata ya. Na-ele onwe gị anya ụbọchị izu ike ọzọ. Na-ebelata mgbatị ahụ ntakịrị, mee ka ike gị karịa oge ọ bụla, mee ka ike ahụ dịkwuo elu.
Cheta, nke a bụ ntakịrị ihe atụ maka gị. Ọ bụrụ na m nwere egbe n'isi gị wee sị ka anyị mee usoro 10 squats, ibu gị kachasị maka 10 reps. Mgbe inwetara ugboro iri 10 m kwuru na ikwesiri ime 2 ọzọ ma ọ bụ na m ga-adọpụ ihe ahụ na-akpalite
I nwere ike ime ugboro abụọ ọzọ, aka nri. Mgbe i mechara nke a, asịrị m na enwere m nke ọzọ maka gị ma ọ bụ na m ga-ewepụta ihe a. Ga-enweta nke ọzọ.
Ole n’ime usoro ndị a ka i chere ị ga - emeli? Maka na ndị a bụ ụdị nke setịpụrụ nke na-eme mgbanwe. Iji nye aru gi ihe mere igbanwe. Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga - eme ihe a n’awa isii na - esote, ma ọ bụ awa atọ, ma ọ bụ aka elekere abụọ, ị na-egwu onwe gị.
Nke ahụ abụghị otu ị si arụ ọrụ. Na-azụ submaximally. Ma i nwere ike ime nke ahụ, ị ​​nwere ike imeri submaximally, mana ọ na-ewe m ogologo oge na mgbatị ahụ nke ọtụtụ mmadụ enweghị.
Anyị na-ekwukwa banyere ọzụzụ dị mma. Na ndị egwuregwu kwa, anyị kwesịrị ịkwalite ma weghachite, kpalie ma gbakee. Ha nwere ihe ndị ọzọ ha ga-eme.
Ikwesiri ịrụ ọrụ na nka ha. Havekwesịrị ịme ihe ndị ọzọ, ọrụ ọbụlagodi na mgbasa ozi. I nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'ụbọchị enyere.
Just na-adịghị dị hama pụọ ​​n'oge ibu ibu ọzụzụ. Would gaghị arụ ọrụ nke ọma n’ọhịa. Ya mere, m na-agwa gị, ọ bụrụ na akọwapụtara ntụgharị uche dị ka ọzụzụ siri ike ma na-agbasi ike karịa oge ikpeazụ.
Mgbe ahụ, m bụ onye na-akwado ịlụ ọgụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị adị dị ka anyị si akọwa ya, ọ bụ kpọmkwem na ụwa nke ọgwụ egwuregwu, ezigbo ọnọdụ ahụike nke anyị chọrọ izere n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla. Ysmụ okorobịa, ịchọrọ izere nke ahụ, ọ dị mma.
Yabụ ihe m na-akwado bụ gbalịa ibelata ya ntakịrị. Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme, ATHLEANX hiwere ntọala iji mee ka ị ghara ị nweta mgbatị ahụ gị na-enweghị ike ịbanye na nchịkwa. Iji nye ahụ gị izu ike na izu ike ọ chọrọ.
Site na mgbakwunye nri kwesịrị ekwesị, yana nri kwesịrị ekwesị, yana ụzọ ziri ezi iji wee jụụ, ịkwanyere udo, ziri ezi. Mgbe ị ka na-azụsi ọrụ ike, na-agbasi mbọ ike, na-esikwu ike karịa mgbe ahụ M ga-asị na-abịa TEAM ATHLEAN, ụmụ okorobịa. Bịakwute m, ka m nye gị ọzụzụ, m ga-egosikwa gị etu ọ ga-esi dị irè site na isoro usoro ihe omume m.
Nwere ike ime ndị ahụ site na ịga na ATHLEAMX.COM. Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ isiokwu ebe a ka ị gụọ ma hụ ma hụ ma hụ ihe ị ga-enweta n'aka ha.
Iji hụ ma ọ dịkarịa ala otu ị nwere ike isi gbanwee ọzụzụ gị iji gbaa ume mgbanwe dị mma na-enweghị ịkọwapụta ihe ọwa a dum gbasara ma akpọrọ m gị ka ị lee anya. Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye na mmemme anyị, gaa ATHLEAMX.COM ozugbo.
Ndi bekee, achọrọ m iwepụ nke a n'obi m, m nwetara okwu a, m ga-aza. Know mara na edemede gara aga bụ n’ezie echere m na nke ahụ bụ ezigbo ihe. Ndi mmadu kwesiri ikwurita okwu banyere ya n'ozuzu ya.
N'ihi na ọtụtụ mmadụ nwere ọtụtụ mmetụta dị iche iche, mana m dabere na ndabere ahụike na nke a bụ ihe dị adị n'ezie. Na ihe anyị na-ekwesịghị ilelị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ uru siri ike site n'ịrụsi ọrụ ike gị.
Ọ dị mma yabụ hapụ ihe ị kwuru n’okpuru. Ekwenyesiri m ike na nke a bụ nnukwu okwu n'oge a. Anyị ga-ahụkwa ebe ọ na-aga.
Ka ọ dị ugbu a, aga m abịaghachi na ụbọchị ole na ole na isiokwu ọzọ.
Kedu otu m ga-esi bido ibuli ibu?
Ị chọrọbidona aibu ibuna ị nwere ikebulieUgboro 10 ruo 15 nwere ụdị dabara adaba.Bidojiri usoro 1 ma ọ bụ abụọ nke ugboro iri ruo iri na ise, wee jiri nwayọ na-agazi atọ ma ọ bụ karịa. Nke nta nke nta mụbaaibu ibu. Mgbe ị nwere ike mfe ime ka ndị na-atụ aro ọnụ ọgụgụ nke tent na reps, dịkwuoibu ibusite na 5 ruo 10 percent.Ọnwa Ise 12, 2020
Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa, Jeff Cavaliere, Athleax.com. Taa, anyị ga - aga n’ihu n’usoro egwuregwu anyị zuru oke ma nke a bụ maka ndị mbido.
Enwere m mgbatị ahụ zuru oke maka gị na ị ga-eme nzọụkwụ. Aga m agwa gị ihe ị ga-eme. Ọbụghị naanị izu ole na ole, kama ọnwa atọ.
Achọrọ m ijide n'aka na ị na-eme ihe niile ọ bụla. N'ikwu nke a, ndị be anyị, ka anyị bido ịkụda usoro ihe mmegharị 10 dị mkpa nke onye mbido ọ bụla kwesịrị ịma. Ọ dị mma, yabụ na ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịghọta na e nwere usoro mmegharị 10 ndị a ịchọrọ iji mara, mana n'ime usoro mmegharị enwere ụfọdụ mgbanwe mmega nke anyị ga-ewukwasị.
Anyị na-ewetara ha site na ọkwa 1 ruo ọkwa 2 na ọkwa 3. ọdịiche dị n'etiti ọkwa ndị a bụ ma ọ bụ mgbagwoju anya nke mmega ahụ ma ọ bụ oke ibu ị nwere ike iji tinye mgbatị na mmega ahụ n'ihi na ọ ga-adị mkpa na ị ga-ejide n'aka na ị na-eme onwe gị ka ị gaa n'ihu n'okwu abụọ a. Ya mere, gịnị ka ọ dị? Ọfọn, anyị na-akpọ usoro mmegharị izizi ihe ntụgharị ahụ dị larịị.
N'ebe a, anyị na-eji ubu, obi, na triceps mee otu mmegharị dịka nkwụsị na ọkwa kachasị mfe. Ihe na-amasị m bụ ntụgharị dị ka ọkwa Ọkwa 1 n'ihi na ọ chọrọ ka ị setịpụ njikwa scapular n'aka gị nke ọma n'ala. Anyị si ebe ahụ kwaga na bench pịa pịa.
Anyị na-ewere ala dịka ihe nwere ike inyere anyị aka iwulite nkwụsi ike ahụ, anyị kwesịrị inwe nkwụsi ike ahụ n'onwe anyị ugbu a. Ihe dị mma iji dumbbells bụ na ị ga-ahụ ya ebe a ka ha nwere ike ise n'elu kpamkpam mgbe ịmalitere ahaghị n etiti aka nri na aka ekpe. Maka na ị tụkwasịrị aka gị abụọ n’elu osisi siri ike.
Anyị na-aga n'ihu na usoro esemokwu ọzọ na nke ahụ bụ nkwụsị kwụ ọtọ. N'ebe a, anyị na-ekwukarị banyere ubu na triceps, ọrụ mgbasa ozi dị n'elu. Anyị ga-amalite site na iji otu dumbbell pịa.
Ọ dị mfe ịkwaga otu ogwe aka n'otu oge n'ihi na ị nwere ike ịlele maka ahaghị aka nri na aka ekpe, yana naanị otu ogwe aka, ọ dị mkpa ka ị ghara ịchịkwa ahụ n'otu oge. Mana ọ bụrụ na anyị eruo ogo 2, ugbu a, anyị kwesịrị ịkpọkọta ha abụọ ọnụ. Ọzọ, ibu ibu a na-agagharị na isi na-achọ nkwụsi ike na njikwa karịa, mana anyị ga-eme nke ahụ ma ọ bụrụ na anyị gaa n'ụzọ ziri ezi.
Anyị na-agakwa ọkwa nke atọ ebe a, ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-agbakwunye ụlọ ọrụ mgbachi ahụ ọzọ. Ugbu a ị ga-ebugharị ahụ gị n'akụkụ ụlọ mmanya ahụ na-emegide mkpọtụ ahụ gị, nke na-agbakwunye mgbagwoju anya, mana ị nwekwara ike itinye ọbụna ibu dị arọ na mgbatị ahụ a. Anyị na-aga n'ihu na ụkpụrụ nke ọzọ, ịdọrọ kwụ.
Yabụ ugbu a anyị na-ekwu maka biceps na azụ. Anyị na-amalite site na akpọrọ Ahịhịa Akwadoro Chest. Mgbe anyị chere ọnọdụ a, anyị enweghị ike ọ bụla dị ala iji chọọ usoro ahụ.
Anyị nwere ike ilekwasị anya n’ikike anyị nwere iji nwekwuo ike ma zụlite ndị ahụ na-adọta akwara. Agbanyeghị, anyị nwere ike wepu nkwado a wee gaa ọnọdụ tripod n'ọkwa 2. Ebe a ị ka nwere ntakịrị nkwado, ịkwesighi iji obere azụ gị kwado ahụ gị na oghere gị niile, mana ị belatala ego ahụ. nke nkwado ma mee ka nsogbu dị na mọzụlụ gị site na ibu ejiri ebe a.
Mgbe ahụ n'ezie anyị nwere ike ịgagharị n'ahịrị ntụpọ na ọkwa 3, ebe ugbu a ịchọrọ mkpa na nkwado azụ na ike ịchekwa ahụ gị n'ọnọdụ ziri ezi na ọnọdụ iji nwee ike ịwepụ ihe dị arọ n'okwu a. Anyị ga-agazi n'ọnọdụ nke anọ ebe a ma ọ bụ mgbatị kwụ ọtọ. Anyị makwaara na ọkwa dị ala ebe a bụ ihe nke pulldown.
N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ịnwere igwe na-akwada, ịnwere ike iji ya mee ka ọ dị ogo nke na onye ọhụụ nwere oke ọhụụ nwere ike ime. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na ya, ị nwere ike iji band gbafee ihe ndọba elu ma mee ụdị nke a pịrị apị nke pulldown. O doro anya, ọ bụrụ na anyị ewere ya na ọkwa ọzọ, anyị nwere ike iwepụta onwe anyị ịme ihe.
Ugbu a, anyị na-eji teepu, mana na ọnọdụ enyere aka. Otu egwu a ga - enyere ahụ gị aka site na 50 ruo 80 pound, dabere na nguzogide nke otu ejiri. N'ezie, ọ bụ ebumnuche anyị iji mezuo ike gị n'ọkwa 3 ịme onwe gị na-enweghị enyemaka ọ bụla.
Nke ahụ na-ewetara anyị usoro ngagharị anyị na nke ahụ bụ mgbatị. Ma ọ bụghị maka ịdọta ahụ gị dị elu n'oge a, ọ bụ maka ịmụ etu esi adọta n'azụ azụ na hips n'ihi na ha bụ ụfọdụ ike kachasị adọta n'ime ahụ dum ma ọ bụrụ na ị mụta otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi. Ya mere, anyị na-amalite site na ihe a na-akpọ ihe nkwado na ọkwa 1, nke anyị na-etinye uche na ịgbanye úkwù ahụ azụ wee weghachite onwe anyị n'ọnọdụ kwụ ọtọ na mgbatị mgbatị dị ike.
Anyi weta ya n'ogo 2 ebe a na RDL, ikwesighi iwepu uzo nile site na ala dika i na eme oku, ma muta otu esi eji hips ndi ahu eme ihe di mkpirikpi iji nweta ahihia di ike ndọtị. N'ezie, dịka m kwuru na mbụ, ọkwa 3 na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime mmega ahụ kachasị mma anyị nwere ike ime ma ọ bụ ọnwụ, ụkpụrụ ọla edo maka ike na agbụ na-esote. Nke ahụ na-ewetara anyị usoro usoro na-esote ma ọ bụ squat.
Lee ndi be anyị, anyị na-ekwu maka ike ịmegharị ahụ gị na elu na mbara igwe. Na n'ezie anyị na-amalite site na iche iche nke squat, dumbbell dobe squat. Ihe na-amasị m karịa onye ọ bụla bụ na ọ na-akuzi onye mbido ọ bụla ebe ọ bụla ahụ ha kwesịrị ịdị na mbara igwe mgbe ha na-eme squat, dị ka dumbbell ga-ada ada site na etiti ike ndọda na ahụ gị n'ime otu Ọnọdụ ziri ezi.
Mana anyị enweghị ike ịbubata ibu na-aga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi. Yabụ ugbu a anyị kwesịrị ịmụ etu esi eme ka dumbbell a banye n'ọkwa ọkwa n'ọkwa 2. Ọ bụ obere nsogbu, mana ịkwesịrị inwe ike ịchịkwa nke ahụ ebe ahụ.
Nke a bụ mgbanwe zuru oke na ọkwa 3 ma ọ bụ kpochapụwo azụ squat. Na ebe a, n'ezie, anyị ga - enwe ike iji ọtụtụ ibu mgbe anyị na - anọgidesi ike n'usoro igwe ọrụ anyị ji eme ka squats zuru oke. Ugbu a usoro nke asaa na nke asatọ nwere njikọ.
Ha bụ mgbanwe nke lunge. Ma ugbu a, dịka Onye Nkụzi Ike Egwuregwu, enwere m ike ịgwa gị na lunge bụ otu n'ime ụzọ kachasị eleghara anya mana ọ bara uru ịkwesịrị ịma. Anyị na-amalite site na mgbanwe dị iche iche, naanị anyị na-emegharị ahụ anyị na elu na mbara igwe, dịka squat, mana were otu ụkwụ n'ihu nke ọzọ.
Anyị ga-ebido site na ịkewa dị mfe site na ibu ahụ. Enweghị ibu Cheta na mgbagwoju anya ma ọ bụ ịdị arọ nke mgbatị ahụ na-ekpebi ọkwa anyị nọ na ya. Ugbu a, iji were ya na ọkwa 2, anyị na-agbakwunye ụyọkọ n'otu dumbbell split squat, na-arụ ọrụ n'akụkụ ọ bụla, mana na-aga ogologo na ala na-ewuli ike na quads anyị.
Mgbe ahụ, anyị ga-ewere ya otu nzọ ụkwụ n’ihu, na otu n’ime mmemme m kacha amasị m, Dumbbell Bulgarian Split Squat. Ọzọkwa, anyị na-arụ ọrụ n'otu akụkụ, mana anyị nwere ike ịbawanye ibu anyị na-eji ebe a na ihe ịma aka dị na ụkwụ n'ihu. Mgbe ahụ, anyị chọrọ itinye mgbagharị ma ọ bụ ebe a ka mgbanwe dị iche iche na-abanye.
Na ọkwa 1, ị ga-ahụkwa ọnọdụ dị nro mgbe ị na-eme lunge. Ulo ehihie na-amasị m n'ihi na ọ na-agbaghara gị na ikpere gị mgbe ị nwere nsogbu ikpere ugbu a. Anyị ga-ewere ya n'ogo 2 ebe anyị na-agbakwunye otu dumbbell na ọnọdụ ebe a wee mee otu akụkụ ma ọ bụ akpa akwa na-agbanwe akpa ume.
Nke a dị mma n'ihi na ọ chọrọ nkwụsi ike hips gị n'ụgbọ elu nke ihu ka ị ka na-arụ ọrụ ahụ n'ime ụgbọelu ahụ. N'ezie, anyị nwere ike ịgbakwunye dumbbell ọzọ na esemokwu na ọkwa 3 iji mee mgbanwe dị oke egwu, ọ bụ naanị azụ azụ. Anyị abịakwutela usoro nke iteghete ebe a ụmụ okorobịa, ọ bụkwa isi mgbagharị na-agagharị.
N'ịghọta na ịkpụkpụ azụ na ntụgharị ntụgharị pelvic dị oke mkpa iji mụta otu esi edozi nkwekọrịta gị nke ọma. Anyị ga-ebido site na ihe dị mfe na ọkwa 1 na ntanye. Nke a bụ mmegharị Pilates nke na - akuziri gị ọ bụghị naanị ka ị ga - esi si na ala bilie, kamakwa otu esi ejikwa akụkụ ahụ na nkebi otu ị na - agbada ala.
Nke a wetara anyị n’ogo 2 ebe anyị nwere ike ime ihe ugbu a akpọ jackknife. Na ụkwụ pụọ n'ala ugbu a, anyị nwere ihe ịma aka ọzọ dị ka ụkwụ ga-elekọta ya n'onwe ha. Na ọkwa 3 anyị nwere ihe siri ike karị, ya bụ, ikpere ikpere na-ebuli elu.
Ugbu a, ihe na-achọ ka ahụ gị na-achịkwa mgbe ị na-atụkwasị na mmanya, ka anyị gbalịa ịmegharị pelvis gị karịa iji mgbatị ahụ na-ebuli ikpere gị. Mgbe ahụ, anyị mechara nwee ihe ịnyịnya, ọzọ nke ndị ahụ elegharaghị usoro mmegharị anya anya, mana ọ dịkarịa mkpa. Ndi mmadu, unu aghaghi imuta otu esi ewulite aka na ike aka ma megharia ha nke oma.
Anyị na-amalite site na akpa igbe na ọkwa 1, ebe anyị nwere otu dumbbell n'otu akụkụ. N'ezie ị na-arụ ọrụ n'akụkụ abụọ. Anyị na-aga na Onye Ọrụ Ubi ebe anyị nwere ụda olu ugbu a, nke ga-eme ka ụba ibu ị na-ebu.
Mgbe ahụ anyị gafere na nke atọ kachasị achọ ihe na nke a bụ ibu ebu. Ozugbo ị weliri ogwe aka ndị ahụ n'elu isi gị, dịka m kwuru na Press, enwere ọtụtụ isi ihe ị chọrọ n'ahụ. Kedu ka anyị si arụ ọrụ anyị site na ọkwa ndị a na usoro ije ka ị wee nwee atụmatụ ị chọrọ ịgbaso? Ọfọn, anyị na-amalite ebe a na ọnwa izizi nke ọnwa izizi anyị, nke kewara ụzọ atọ ọzụzụ: Na A, B na C.
Egwuregwu A na B bụ mgbatị ahụ gị zuru oke ma rụọkwa ya na Mọnde, Wednesde na Fraịde. Ya mere, ịga A, B na A n’izu nke mbụ na B, A na B n’ime izu nke abụọ, ị ga-ekwughachi nke ahụ n’izu atọ na nke anọ. C-ọzụzụ na-ewere ọnọdụ n'ime ọnwa na Tuesday na Thursday n'etiti ụbọchị dị n'etiti.
Ugbu a, site n'ụkpụrụ mmegharị 10 ndị a, kedu ka anyị ga-esi kewaa ha n'ime A, B na C. Ọfọn, anyị na-amalite site na A na A anyị na-amalite site na usoro squat, na-esote nkwụsị kwụ ọtọ, ihe nkwụsị, ma mgbe ahụ nri ehihie, na nke a na-agbanwe agbanwe lunge mgbanwe. N'ime mgbatị ahụ B, anyị nwere mgbatị, lunge, oge a na-agbanwe agbanwe, ihe kwụ ọtọ, wee dọpụta mgbatị.
N'ime mgbatị ahụ C, anyị na-agwakọta abụọ nke ikpeazụ m kwuru, usoro mgbanwe mgbanwe na usoro mmegharị. Kedu ihe nke ahụ pụtara n'okwu doro anya maka ọkwa 1? Gịnị ka ị ga-erubere isi? Ọfọn, anyị akụtuola usoro mmegharị ahụ n'ime usoro mgbatị atọ a ọzọ, na omume ndị anyị na-etinye ebe a bụ mmemme 1 Ọkwa ndị a. Emere ihe omume ndị a na usoro atọ nke 12-15 ugboro ugboro ruo njehie ụdị.
Ma ọ bụ ịme nkwarụ nkịtị na ibu ahụ naanị, na-emega ahụ. Ebumnuche ebe a bụ ka ewulite ikike gị ịme na ijikwa mmegharị a. Ọ bụghị maka itinye ibu arọ, mana n'ihi nke ahụ, ụdị nkwụghachi dị elu.
Ma ị nwere ike ịgwa onwe gị, sị, 'Mana m na-eme bench pịa,' anyị na-agaghachi azụ ebe a, anyị na-ekwu maka mmega ahụ isii na ọnwa a. Achọrọ m ijide n'aka na ị mụtara iwulite ntọala ahụ ugboro ugboro iji mụta ihe ndị a ka i wee nwee ike ịga nke ọma na usoro ahụ. Ọzụzụ ọ bụla egosiri ebe a nwere ike imere gị nke a wee kwadebe gị maka ọnwa na-abịa.
Nke wetara anyị n’ọnwa nke abụọ. N’ọnwa nke abụọ anyị nọ na - emezi ọkwa n’ọkwa abụọ. Ọdịdị ahụ ga-adịgide.
Anyị ka nwere otu nchịkọta nke usoro mmegharị, belụsọ n'oge a na mgbanwe nke omume anyị nwere mgbatị ọhụrụ. Ya mere, ugbu a anyị nwere D, E, na F, ebe D na E bụ mgbatị ahụ zuru oke nke na-emegharị na Mọnde, Wenezdee na Fraịdee. Mgbe ahụ, anyị nwere isi ndị a ma na-emega ahụ na Tuesday na Tọzdee.
Site na mmemme nke Ọkwa 2 nke dị ebe a ugbu a, ị ga - ahụ na ebumnuche agbanweela ntakịrị, na - ewepụ naanị ntọala ahụ, wee gbalịsie ike iwusi ike na ntọala ahụ. Nkwughachi na nhazi ga-agbanwe. A na-ebelata ihe ntanetị gaa na 8-12 na oke ahọpụtara nke na-enye gị ohere ịda n'ime ntụgharị ahụ mana ị ga-enwe ike ịme ihe ọ bụla dị mma.
Na mgbakwunye, ị nwere nhọrọ ị gbakwunye ebe etinyere ebe a iji wuo olu ahụ ka ị na-agbasa ahụmịhe gị na usoro mmegharị a. Kedu mgbe ahụ, dịka m kwuru, na-akwadebe anyị maka ihe ịga nke ọma na ọkwa 3. Yabụ ugbu a n'ọnwa nke atọ, ị nwere ike ime nke a karịa otu ọnwa.
Kwuo banyere otu isiokwu na-apụta ebe a. Achọrọ m ijide n'aka na ndị mbido anyị nọ ebe ahụ na-achụso ihe iji nweta uru kacha mma ma nweta ọganiihu kachasị mma. Anyị ewuwo ntọala ahụ ma ugbu a, anyị ga-agbaji ya ọzọ, yana H, G, na m na-arụ ọrụ mgbatị ka ejiri otu otu usoro ihe eji agagharị, mana ugbu a, anyị na-ewebata usoro 3 a.
Na ihe na-anọgide gị na ndị a larịị 3 omume bụ omenala barbell omume, nke i nwere ike ime na atọ tent nke ise ma ọ bụ ugboro atọ omume na-ewusi ike gị. Ebumnuche bụ iwuzi ntọala nke ike n'elu ntọala a siri ike nke were oge iji wuo site na ncha. Ka ị na-eme ihe omume ndị a, ọ bụrụ na ị nwere ike ịme usoro atọ nke ise, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-anọgide na-ebuwanye ibu ma jiri nwayọ bufee mmegharị ndị a.
Would ga - eme nke a site n’ịgbakwunye pound ise na mgbatị ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nwere ike mezue usoro atọ nke ise na mgbatị ahụ gara aga. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ị nwetabeghị usoro atọ niile nke ise, megharia ịdị arọ ị jiri na mmega ahụ gara aga. Ọ bụrụ na ị daa ọzọ, ị nwere ike karịa ibu arọ ị họọrọ, belata ya site na pound ise ma megharịa usoro ahụ ruo mgbe ị mụtara usoro atọ nke ise.
Na omenala, ibu ị ga-eji ebe a ka ịmalite, bulie ibu ị maara na ị nwere ike ịme akara ise mana ka na-ama gị aka. Ga-enwe ike ịgbanwe ha oge ọ bụla dabere na ihe ịga nke ọma maka ọdịda m kwuru. Gị na ụmụ okorobịa a, ị nwere usoro egwuregwu bọọlụ usoro.
Dị ka oge niile, m ga-ahapụ screenshots ebe a ka ị were ma hụ na ị nwere ike ịgbaso atụmatụ a site na nzọụkwụ. Oleekwa ebe ị ga-esi ebe a? Ọ dị gị n'aka n'ezie. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụlite ike a n'ihu, ị nwere ike ịnọ ebe a n'akụkụ nke atọ a na ọkwa a 3 ma na-abawanye ma na-eme nke ahụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanwe ebumnuche gị ma lekwasị anya na ịwulite akwara ihe ọ bụla ọ bụ, enwere m atụmatụ nzọụkwụ nke ga-agụnye atụmatụ egwuregwu na-edozi ahụ na Athleanx.com. Ndi be anyi, oburu na ichotara edemede a nyere aka biko hapu ihe ikwuru na isi aka gi! Chei! Chei! Chei! Chei! Chei! Chei! Chei! Kedu ihe kpatara na ị bịaghị n'oge, nke a bụ isiokwu mbido.
Abughi m onye mbido. Oh na ị bụghị Ee. Are na-eleba akwara ndị a anya? Gini mere i ji egosi biceps gi mgbe obula banyere ihe mbu? N'ihi na ha dị mma n'anya.
Ọ DỊ MMA. Ndi bekee, oburu na ichoputara isiokwu a nyere aka ma ichoro ihu ndi ozo n’usoro a, hapu aka aka n’okpuru. Mee ka m mara ihe m nwere ike ikpuchi ma aga m eme ike m niile iji mee nke ahụ maka gị.
Ma ọ bụrụ na i nwebeghị, pịa bọtịnụ 'Idenye aha' wee gbanyụọ ọkwa gị ka ị ghara ịhapụ isiokwu ọhụrụ mgbe anyị biputere ya. Kedu ihe bụ nke a? Ana m egosi quads. I kwuru mọzụlụ dị iche iche.
Aga m ahụ ụnụ mgbe emechara. Look mara mma.
Ndi na-ebuli elu na-ere abụba afọ?
Ọzụzụ iguzogideaghọwanye ihe dị mkpa ka anyị na-aka nká, n'ihi ọtụtụ ihe, gụnyere ibelata nchịkọta nkeafọ abụba. Otu nnyocha e bipụtara na mbipụta 2013 nke International Journal of Cardiology gosipụtara na nnukwu ikeọzụzụ iguzogidena-ebute ngwa ngwaafọ abụba ọnwụkarịa ọrụ kadio naanị.
Ga-eweli abụba arọ abụba?
Ebuli IbuN'ihi naAbụba abụba
Na otutu akwara = enwere ụba metabolism. Ahụ ike kachasị gị, ahụ calorie na-arịwanye eluọkụọbụna mgbe ọ na-ezu ike. 2)Ebuli eluna oge ezumike zuru oke bụ ụzọ kachasị mma iji mee mgbanwe mgbanwe homonụ dị mma ️. Na homonụ kwesịrị ekwesị dị mkpa makaabụba ọnwụ.Ọnwa Ise 16, 2019
Kedu oge m ga-ahụ nsonaazụ site na ibuli ibu?
Ibu ibuọzụzụNsonaazụfọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ọ bụ ezie na ị nwere ike ọ bụghịleeiheNsonaazụdikangwa ngwaka ha na eme. O nwere ike ịbụ ihe dị ka izu anọ tupu gịleemmụba nke akwara. Ọ bụrụ na ị na-agbalị idaibu ibu, gịkwesịrịebumnuche maka ịlafu ihe dị ka pound abụọ na atọ kwa izu.
kedu ihe poteto dị mma
Ndi mbido na-erite ezigbo?
Newbie uruna-ezo aka na mmụba ngwa ngwa na oke akwara nke na-eme mgbe ndị mmadụ na-enweghị obere ọrụ ibuli elu ịmalite ịmalite ibuli ibu. Ọ bụrụ na ị na-eso usoro nri ma ọ bụ atụmatụ ọzụzụ emezighị emezi, ị nwere ike ịmenewbie-iheuruọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị zụọla ọtụtụ afọ (nọgide na-agụ iji mụta otu esi).
Iweli ihe dị arọ ọ̀ na-eme ka abụba dị ọkụ?
Ọ bụ ezie na aibu ibu-ịrụ ọrụ mgbatị ahụ anaghị arụ ọrụọkụdị ka ọtụtụ calorie dị ka mgbatị cardio, ọ nwere uru ndị ọzọ dị mkpa (2). Ọmụmaatụ,ibu ibuọzụzụ dị irè karịa cardio na iwulite ahụ ike, na akwaraọkụcalorie na-ezu ike karịa ụfọdụ anụ ahụ ndị ọzọ, gụnyereabụba(3).24.10.2017
Nwere ike oge awa 24 zuru ike maka akwara?
24ruo 48awanke mgbake n'etiti oge maka otuakwaraotu na-abụkarịezu. Thiszọ a, anyị na-egbochi nchịkwa, na-achọpụta nsonaazụ kacha mma.04.04.2013